Shiinaha Isostatic Pressing Graphite Blocks Soo saaraha iyo Alaab-qeybiye | Jinglong
Xayiraadaha Sawir-gacmeedka Istiraatiijiga ah
Sawirka Isostatic Pressing Graphite waa nooc cusub oo walxaha garaafka ah oo la soo saaray 1940-yadii oo leh taxaneyaal sifooyin heer sare ah. Graphite Sawirka Isostatic wuxuu leeyahay iska caabin kuleyl wanaagsan. Gaaska aan firfircooneyn, xoogiisa farsamo wuxuu ku kordhayaa kororka heerkulka, wuxuu gaarayaa qiimaha ugu sarreeya qiyaastii 2500 ℃ .Marka la barbardhigo garaafka caadiga ah, qaabdhismeedka garaafka 'isostatic graphite' ayaa ah mid aad u jilicsan, jilicsan, oo qaabeysan.
Waa isku dheelitirka balaarinta kuleylka waa mid aad u hooseeya, iska caabbinta kuleylka kuleylka waa mid aad u fiican, isotropic-keedana, iska caabinta daxalka kiimikada waa mid xoogan, dhanka kale, waxay leedahay kuleyl iyo koronto wanaagsan iyo waxqabadka mashiinka wanaagsan. Blocks Isostatic Pressing Graphite Blocks ayaa loo isticmaali karaa EDM garaafka korantada, daaweynta biyaha, korantada tabinta, anode cathode graphite block, korantada elektroolka ah, iyo ujeeddooyinka saliidaynta. Qeybtayada 'graphite block' waxay leedahay astaamaha cufnaanta-sare, adkeysi hoose, iska caabinta qiiqa, u adkaysiga daxalka, u adkeysiga heerkulka sare, habdhaqanka wanaagsan, iwm.
Isku-mid-ahaanshaha Better: isku-mid ahaanshaha maaddada wanaagsan ayaa macnaheedu yahay cimri dherer iyo xakamaynta xasilloonida leh ee kuleylka.
Cabbir ka weyn: waxaan soo bandhigi karnaa baloogyo laba jibbaaran oo weyn sida 2150 * 1290 * 500mm iyo baloogyo wareegsan oo ka weyn D1450 * 1200mm & D1100 * 1200mm. cabbirka hadhuudhka 10um
Daahirsanaanta sare: Marka la codsado macaamiisha, waxaan ku siin karnaa alaabooyin leh ash ash ka yar 20ppm / 30ppm. Wixii semiconductor iyo codsi kale oo gaar ah, ash ash waxaa lagu xakamayn karaa in ka yar 5ppm.
Modulus of dabacsanaan
Hore: Qaybaha garaafka ee foornada faakiyuumka
Xiga: Cadaadiska Isostatic Press Silicon Carbide Graphite Crucible: